Waa maxay saameynta nacabka? | Saadaasha Shabakadda
Waxaa jira ifafaale aan la soo koobi karin oo ku jira saadaasha hawada oo sharraxaysa waxyaabo badan oo aan weli garanayn maanta. Mid ka mid ah waxyaalahaas oo aynaan ogayn sida ay u shaqayso waa xaaladahaas ay hawadu ka kulul tahay sida caadiga marka ay jirto dabayl galbeed.
Tani waxay u sabab tahay saamaynta foehn. Waa dhacdo dhacda marka hawo kulul oo qoyan lagu qasbo inay buur fuulaan. Markay hawadu ka soo degto, waxay ku kacdaa qoyaan yar iyo kuleyl badan. Ma rabtaa inaad wax ka ogaato wax kasta oo ku saabsan saamaynta foehn?
1 Sidee saamaynta nacabka u dhacayaa?
2 Saamaynta xun ee adduunka oo dhan
2.1 Foehn wuxuu saameyn ku yeelanayaa waqooyiga Alps
2.2 Saamaynta xun ee Waqooyiga Ameerika
2.3 Saamaynta Foehn ee Andes
2.4 Foehn saameyn ku yeelashada Spain
3 Saamaynta cadawga iyo beeraha
Sidee saamaynta nacabka u dhacayaa?
Isbaanishka, markay dabaysha galbeed ka soo kacdo badweynta Atlantika, cufnaanta hawadu waa inay ka gudubtaa dhowr buurood. Markay hawadu la kulanto buur, waxay u janjeersataa inay fuusho si ay uga gudubto caqabaddaas. Markay hawadu kor u kacdo, waxay lumisaa heerkulka, maadaama heerkulka heerkulka heerkulku uu sababayo in kolba jooggoodu sare u kaco, heerkulku hoos u dhaco. Markuu gaaro buurta dusheeda, wuxuu bilaabaa inuu soo dego. Maaddaama cufnaanta hawadu ka soo degayso buurta, waxay lumisaa huurka oo waxay kordhisaa heerkulkeeda, si marka, markay gaadho dusha sare, heerkulkeedu wuu ka sarreeyaa kii ay ku bilawday inay buurta fuulaan.
Tan waxaa loogu yeeraa saamaynta foehn waxayna ku dhacdaa halkan Isbaanishka markay dabaysha galbeed dhacdo, in kasta oo ay tahay astaamo ku dhowaad dhammaan buuraha. Marka cufnaanta hawo kulul ay fuulaan buurta, way sii ballaadhaa, maaddaama cadaadisku hoos u dhacayo dhererka. Tani waxay keentaa qaboojin iyo sidaas awgeed uumiga joogtada ah ee uumiga biyaha, kaasoo horseeda sii deynta kuleylka qarsoon. Natiijadu waxay tahay in hawada kacaysa ay keenayso samaynta daruuro iyo roob. Jiritaanka daruuro fadhiisanaya oo joogto ah (xagga sare) waa wax iska caadi ah.
Caadi ahaan saameynta foehn waxay la xiriirtaa dhaqdhaqaaqyada duufaanka waxayna dhacdaa oo keliya marka wareegga hawadu uu aad u xoog badan yahay oo awood u leh inuu ku qasbo hawada inay gebi ahaanba ka gudubto buurta muddo gaaban.
Saamaynta xun ee adduunka oo dhan
Sidii hore loo soo sheegay, saamaynta cadawga wuxuu ku dhacaa ku dhowaad dhammaan dhulka buuraleyda ah ee adduunka, in kasta oo saamaynteeda ay tahay mid maxalli ah. Saamaynta foehn waxay sidoo kale ku dhacdaa dooxooyinka. Cawaaqib xumada ka dhalan karta dooxada ayaa ah inay gebi ahaanba qalloociso raaxada kuleylka. Xaaladaha heerkulka hoose ee dooxooyinka badanaa waa kuwo aad u xiisa badan. Mararka qaarkood kuwani waxay kuxiran yihiin jihaynta, qoto dheer, qaab-dhismeedka (haddii ay tahay dooxada asalka qulqulka ama asalka glacial), iwm. Marka lagu daro arrimahan qaboojinta, xaaladaha saadaasha hawada ee xasilloon ayaa sidoo kale saameyn ku leh, maadaama ay awood u leeyihiin inay sababaan kala-jebinta heerkulka oo jebisa astaamaha dabeecadda kuleylka caadiga ah ee jawiga.
Marka waxaan dhihi karnaa saameynta nacabka waxay awood u leedahay inay ku beddesho dhawr saacadood gudahood xaddiga huurka ee dooxyadu leeyihiin. Waan sii wadi doonaa si aan u aragno waxa ka dhalan kara saameynta xun ee qeybaha kala duwan ee adduunka.
Foehn wuxuu saameyn ku yeelanayaa waqooyiga Alps
Aragtida saameynta foehn waxay noo sheegaysaa in markay dabaysha diirran ee qoyan ay dhacdo oo ay la kulanto buuro kala fog, si ay u dhaafto, waa in lagu qasbaa inay fuulaan. Markay taasi dhacdo, uumiga biyaha ah ee hawadu qaado ayaa qabooba oo uriya, roobabna ka soo saara dhinaca dabaysha ee buuraha kala fog. Tani waxay yaraynaysaa dhammaan qoyaanka hawada ku jira, sidaa darteed xagga hoose, marka hawadu soo degto, waxay noqdaa cajiin diirran oo qoyaankeedu aad u yar yahay.
Si kastaba ha noqotee, aragtidan ayaa ah mid aan faa'iido lahayn markii aan isku dayeyno inaan sharraxno saameynta foehn ee Alps. Markay ku dhacdo safafka buuraha, waxaa kordha heerkulka, laakiin lama socdo roob ka imanaya koonfurta. Sidey taasi ku dhici kartaa? Faahfaahinta arrintani waxay ku jirtaa xaqiiqda ah in dabaylaha diirran ee gaadha dooxooyinka woqooyiga Alps ayan dhab ahaantii ka iman buuraha koonfureed, laakiin ka imanayaan meelaha sare. Xaaladahaas oo kale, inta lagu jiro koritaankeeda, cufnaanta hawada qabow waxay gaartaa xaalad xasillooni aan caadi aheyn oo ka horjoogsata inay gaarto dusha sare ee caqabadda. Kaliya iyada oo loo maro qulqulka qoto dheer ayay qaar ka mid ah hawadan qabow ee xannibani u sii maraysaa dhinaca woqooyi qaab ah saamayn foehn ah.
Sababtoo ah xaqiiqda ah in waqooyiga Alps ay jirto qoyaan yar, saameyntaan foehn waxay sameysaa cirka qurux badan, sidoo kale waxay dardar galineysaa geedi socodka dhalaalida heerkulka sare. Saamaynta foehn waxay awood u leedahay inay mas'uul ka ahaato kala duwanaanta heerkulka illaa 25 digrii maalinta qaboobaha.
Saamaynta xun ee Waqooyiga Ameerika
Marka saameynta foehn ay ka dhacdo galbeedka Waqooyiga Ameerika waxaa la yiraahdaa Chinook. Saameyntani waxay ugu horreyn ku dhacdaa cirifyada ama bannaanka bari ee Buuraha Rocky ee Mareykanka iyo Kanada. Markay dhacdo kan dambe, dabayshu badanaa waxay u dhacdaa jihada galbeed inkasta oo lagu beddeli karo qaab-dhismeedka. Badanaa Chinook wuxuu bilaabaa inuu ku afuufo dusha sare markii hore ee dhanka Arctic uu u soo noqdo xagga bari, iyo tirada badda oo wax laga beddelay ayaa ka soo galaya Baasifigga, iyadoo soo saareysa koror baaxad leh oo heerkulka ah. Sida cadaw kasta oo kale, Chinook dabaylo way diirran yihiin oo qallalan yihiin, badanaa xoog iyo cirro.
Saamaynta Chinook waa in la yareeyo qabowga xilliga qaboobaha, laakiin kan ugu xoogga badan waa in lagu dhalaaliyo 30 sentimitir baraf saacado yar gudahood.
Saamaynta Foehn ee Andes
In Andes (Argentina) ilaa dabaysha ka dhalatay saameynta foehn waxaa loo yaqaan Zonda Wind. Dabaylkan Zonda sidoo kale waa mid qallalan oo boodh badan. Waxay ka timaadaa cirifka koonfureed ka dib markay dhaafto badweynta Baasifigga, way kululaataa ka dib markii ay fuulay buuraha dhererkoodu ka sarreeyo 6km heerka badda. Markaad marayso aaggan, Dabaysha Zonda waxay awood u leedahay inay dhaafto xawaare dhan 80 km / saacaddii.
Dabaysha Zonda waxaa asal ahaan soo saaray dhaqdhaqaaqa woqooyi-bari ee Feerooyinka Polar, ka dibna waxay diirisay juqraafi ahaan dhanka dooxooyinka. Waa farsamooyin isku mid ah barafka ka da'aya meelaha sare, loona yaqaan dabaysha cad, oo xawaareheedu yahay 200 km / saacaddii. Dabaylkan ayaa muhiim u ah gobolkan oomanaha ah, waxayna kuxirantahay barafka ku ururay barafka. Saameyntu waxay dhammaanaysaa marka hawo qabow ay galaan woqooyi-galbeed oo keliya waxay dhacdaa inta u dhexeysa Maajo iyo Nofeembar.
Foehn saameyn ku yeelashada Spain
Isbaanishka dabeylaha waaweyn qaarkood waa la yaqaan. Abrego, tusaale ahaan, waa dabayl ka timaadda koonfur-galbeed. Waa dabayl dhexdhexaad ah oo qoyan. Si fiican ayaa looga yaqaanaa Plateau iyo Andalusia, maadaama ay tahay qofka keena roobka, madax xanuun, hargab iyo dawlado niyad jab leh. Waa dabaysha dayrta iyo duufaannada guga oo saldhig u ah tacbashada roobka, maadaama ay yihiin ilaha ugu muhiimsan ee biyaha. Waxay ka timaaddaa Atlantic, laga bilaabo aagga u dhexeeya Canary Islands iyo Azores.
Saameynta kale ee soo gaabintu ay keento ayaa ah, qoyaan yaraanta awgeed, waxay fidisaa dabka. Dabayl noocan ah waxaa shuruud ku leh saameynta foehn. Xeebta Cantabrian, Ábrego waxay ka heshaa magacyo sida Viento Sur, Castellano (oo ka imaaneysa Castilla, sidaas darteed koonfurta), Campurriano (oo ka imanaya gobolka Cantabrian ee Campoo) ama "Aire de Arriba" (La Montaña; qaybta ugu sareysa) ka yimid gobolka). Hadday aad u kulushahay, waxay ku tilmaamaan "gabaad", halka "la soo koobay" uu noqon doono mudada dhowr maalmood ah oo ku hoos jirta nidaamka dabaysha.
Galbeedka Asturias, Ábrego waxaa sidoo kale loogu yeeraa hawo laabta, maxaa yeelay markay xoog u afuufto xilliga dayrta waxay keentaa mirahaan inay dhacaan.
Saamaynta cadawga iyo beeraha
Waxaan aragnay in saameynta foehn ay awood u leedahay inay keento kala duwanaanta heerkulka illaa 25 darajo xilliga qaboobaha. In kasta oo saameyntani badanaa tahay mid maxalli ah, haddana dhacdooyinkeeda ku aaddan beeraha aaggu aad ayey u sarreeyaan. Meelaha ay ka muuqato saamaynta foehn, sababtoo ah xaqiiqda ah in hawadu hoos u dhacdo qoyaanka iyo heer kulka ayaa kordha, beeraha aaggan waxaa lagu qasbay inay beeraan roobka, maaddaama waraabku uu kordhin doono kharashka wax soo saarka isla markaana uu dhammaan doono ilaha biyaha.
Haddii aan u fiirino beeraha reer Argentine qaab guud, waxaan ogaaneynaa in qeyb weyn laga sameeyay sidii beeraha roobka loo daadiyo, taas oo lagu horumariyo wax soo saarka leh shuruudaha biyo yarida. Beeridda qamadiga, soodhaha iyo xoolaha ayaa tusaale u ah beeraha ugu caansan ee dalka Argentina.
Dalka Chile, dhanka kale, waxaan ka helnay isbeddel xagga beeraha waraabka ah oo aad uga sarreeya. Tani waxay sabab u tahay kala duwanaanshaha dhacdooyinka saameynta foehn ee aagagga kala duwan.
Waxaad horeyba u ogaan kartaa mid kale oo ka mid ah ifafaalaha saadaasha hawada iyo hawlgalkeeda si aad u faahfaahsan oo ay la socdaan cawaaqibkeeda. Dhacdo in kasta oo ay leedahay saameyn deegaanka ah, haddana adduunka oo dhan laga yaqaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Waa maxay saameynta nacabka?
Germán, laba maalmood:
Magacaygu waa Pepe Criado iyo in ka badan 15 sano, waxaa i soo masaafuriyey Iberia oo ku taal Mareykanka anigoo ah Madaxa Gobolka ee Hawlgallada, dhammaan Ameerika (Koonfurta, Bartamaha, Waqooyiga iyo Kariibiyaanka).
Halkaas waxaan ku qaatay inaan koorso saddex sano ah ka sameeyo NOAA, taas oo u dhigantaa wax la mid ah "Kaaliyaha Saadaasha Hawada ee Loo Adeegsaday Duulista" (in ka badan ama ka yar).
Hadda, ka dib naafanimo uu sababay kansar illaa 2001 (Waxaan ahay 68 jir), waxaan ku laabtay Malaga, halka aan ka imid, oo hadda ku nool Torremolinos.
Loogu talagalay macaash-doon la'aan, urur dhaqameed flamenco maxalli ah oo sanadle soo saarta joornaal. Waxaan qorayaa maqaal ku saabsan dabeylaha iyo dabeylaha ka jira Malaga, gaar ahaan berriga iyo, maadaama saameynta foehn ay ku dhexjirto dabaylkan Malaga, marka laga reebo ku darista sawirada aan u arkay inay lagama maarmaan tahay, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii aad daabacan karto sawir kuwa aad haysato, halkaasoo kor loogu soo qaaday saamaynta Foehn si aad ah loogu qanco waxaanan ku dhiirran lahaa inaan dhaho si buunbuunin ah.
Sida iska cad waxaan dhigi lahaa qoraaga iyo sharaxaadda aad tilmaamtay waana cadahay in, markaan diyaariyay iyo kahor daabacaadaba, aan kuugu soo diri lahaa maqaalka oo dhammeystiran e-mayl iyo markii la tafatiray, dhowr nuqul oo boostada ah.
Ma aqaano haddii ay habboon tahay.
Mahadsanid iyo habsiin,
Jawaab José Criado García
Sawirka uu saaray "saamaynta Foehn ee Alps" ma ahan mid ka yimid aaggaas, waxaa iska leh jasiiradda Canary ee La Palma.
Jupiter iyo duufaantiisa Super! Juno ayaa toddobaadkan na keenaya, sawirradii iyo fiidiyowyadi ugu fiicnaa ilaa maanta!
Kordhinta heerarka badda ayaa halis galisay London iyo Los Angeles